Pejin-tranonkala TOP handefasana modely Adobe After Effects maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Rehefa miasa miaraka amina fampiharana ho an'ny famoronana sarimiaina sy horonan-tsary isika, dia ilaina tokoa ny fampiasana loharano ivelany sy efa natao. Ity karazana azo sintonina na môdely Manolotra ohatra iray amin'ny fanoharana indrindra izy ireo mba hahay hiteny amin'ny famoronana horonan-tsary. Raha ny marina, rehefa nanao ny dingana voalohany niaraka tamin'ny fampiharana aho dia tena nanampy ahy ny fampiasana modely. Indrindra raha manana fotoana ahafahantsika misintona modely matihanina sy amin'ny fotoana ilaina handinihana ny firafitr'izy ireo sy ny masontsivana tsirairay napetraka, afaka mianatra be dia be isika.
Androany isika dia hanao safidy kely amin'ny pejin-tranonkala izay tena mandaitra amin'ny fitadiavana ireo karazana loharano. Mazava ho azy fa lisitra misokatra izany ary avy eto dia manasa anao aho hanampy ahy hamita azy. Pejy web inona no ampiasainao hahitanao ireo loharano tsara indrindra ho an'ny Adobe After Effects?
Ity pejy ity dia manome banky somary be dia be izay misy maodely azo ovaina. Ny tsara indrindra, ankoatry ny fahalalahana tanteraka dia tsy mila karazana fisoratana anarana na fikambananana izany. Ho fanampin'izany, ny fitaovany dia tsy iharan'ny karazana fahazoan-dàlana mba hahafahan'izy ireo mampiasa malalaka ho an'ny tanjona heverina ho mety ary tsy mila manonona ny mpanoratra na fanekena ny toetra. Ary koa, ity pejy ity dia manome fanampiana anao raha tsy hainao ny manitsy modely na manana olana amin'ny fiasa amin'ny fitaovany. Mazava ho azy, tokony ho ao an-tsainao fa pejy 100% amin'ny teny Anglisy izany ka raha tsy hainao ny mivezivezy amin'ny fiteny, dia mamporisika anao hampiasa mpandika teny amin'ny Internet ianao.
Maodely AE maimaim-poana
Mila fisoratana anarana izy io ary manana fotodrafitrasa matanjaka be. Anisan'ireo sokajy misy azy ireo ny môdely fipoahana, sary mihetsika maivana sy angovo, vahaolana vaovao ary safidy malaza eo amin'ny fiarahamonin'ny mpampiasa. Ireo modely nomen'ity tranonkala ity dia iharan'ny fahazoan-dàlana malalaka, izany hoe, tsy misy zony. Io dia miampy satria tsy tokony omenao tombony ho an'ny mpamorona azy ianao ary azonao ampiasaina maimaim-poana amin'ny tetikasanao, na inona na inona izy ireo (ara-barotra na tsia, matihanina na tsia ary na firy na firy ny fanontam-pirinty nataonao). Azo antoka fa loharanom-pahalalana ho an'ny Adobe After Effects hodinihina.
Ity pejy ity dia mirakitra ny karazana modely rehetra ary ny tsara indrindra dia samy manana kalitao mendrika izy rehetra, mety ho anisan'ny tetik'asa matihanina. Na izany aza, araka ny fiheveranao fa tsy afaka izy ireo, na dia azontsika avy eo aza dia manana ny fahalalahana ampiasaina isika. Azo ampiasaina amin'ny karazana tetikasa izy ireo, ary azo alefa tsy misy fetra ny horonantsarinay ary tsy mila isa ny isan'ireo fanontana. Mitaky fisoratana anarana izany ary safidy iray hijerena raha te handray anjara amin'ny tetikasa matihanina isika.
Shareae dia iray amin'ireo pejiko ankafiziko mitady loharano ho an'ny Adobe After Effects. Na dia misy loharano maimaimpoana 100% maimaimpoana sy kalitao tena tsara aza izy io, dia fifangaroana mifangaro izay ahitantsika ny vahaolana premium sy ny vahaolana maimaim-poana. Mitaky fisoratana anarana izany ary manana mpizara hafa hisintomana ireo tetikasa. Rehefa manana azy ireo isika dia afaka mampiasa azy ireo amin'ny fahalalahana tanteraka ary tsy mila ampamoahina amin'ny olon-kafa. Anisan'ireo tolotra vokatra (maimaim-poana na tsia) misy maodely marobe avy amin'ny trano Envato. Recommended tokoa.
Tsy mila karazana fisoratana anarana izany, ary misy rafitra madio sy mazava. Anisan'ireo sokajy fitetezana fitetezana ireo zavatra mifantoka amin'ny famokarana aorian'ny famokarana, ny sokajy vaovao sy ny lohahevitra (taona vaovao, fampakaram-bady, batemy, tsingerintaona ...). Manolotra rohy samihafa izy io izay manome antoka ny fampidinana ireo tetik'asa ary isaky ny modely dia manome horonantsary fampisehoana. Izy io dia manana vahaolana marobe izay azo ampifanarahana tsara amin'ny tetik'asa video amin'ny karazany rehetra. Tena mamporisika anao aho hijery izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Tranonkala TOP misintona modely Adobe After Effects maimaimpoana
Mauro Ramos dia hoy izy:
Mahafinaritra, mila manomboka tetikasa fotsiny aho izao!
Valiny tamin'i Mauro Ramos
Monica miranda dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahafahako misintona ireo môdely video amin'ny 99templates maimaimpoana? Tsy afa-manoatra aho. Mila manana programa manokana ve aho?
Valiny tamin'i Monica Miranda